समाज Archives - Page 12 of 13 - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! समाज
बाहिरियो राजदरवार हत्याकाण्डको रहस्य, सबैभन्दा पहिले मारिएका थिए दिपेन्द्र
दरबार हत्याकान्डको तीन महिनापछि हत्याको अभियोगमा......
बाहुनको छोराले बंगुर पाल्यो भनेर हेपिएका बराल यसरी बने करोडपति
पोखराका व्यवसायी चन्द्रकान्त बरालले जीवनमा धेरै चुनौती खेपे । अन्तत: चुनौतीलाई सामना गरेरै उनले आफूलाई सफल व्यवसायी साबित गरे ।
पोखरा नजिकैको गाउँ पुम्दीभुम्दीमा उनीसहित सात जना दाजुभाइले बाँडीचुँडी खाने दुई सय रोपनी जग्गा थियो । ३६ वर्षअघि सो जग्गा कृषि विकास बैंकमा धितो राखेर बरालले एक लाख ५०......
यसरी हुँदैछ अष्ट्रेलियामा डिपेन्डेण्टको बिजोग, बढे डिभोर्सका घटना
रोशन लम्साल, सिड्नी/अष्ट्रेलिया, सुदुर खबर१० कार्तिक । अष्ट्रेलिया बसाईको ५ बर्षमा गएको शुक्रबार साँझ स्टारबारमा मैले मेरै एकजना आफन्तलाई भेंटे । बियर पिउँदै गरेका दाजुलाई चिन्न त म बच्चा देखि चिन्थे तर भेट नभएको ठ्याक्कै ८ बर्ष भएको थियो । सानैमा अष्टेलिया छन् भन्ने सुनेकाले म आफंै पहिलोेपटक......
पोखरालाई उज्यालो बनाउन चिनियाँ लगानी
सुदुर खबर , कात्तिक १०- मुख्य चोक र सडकभरि सौर्यउर्जाबाट बत्ती बाल्न पोखरा उपमहानगरपालिका र चीनको तिव्व्त सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।
तिब्बतको वैदेशिक मामला विभागमा उपमहानिर्देशक मा क्विनसिन र पोखराका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
१५ करोड रुपैयाँको लागतमा......
राति १० बजेपछि देउसीभैलो खेल्न नपाइने
सुदूर खबर १०, कात्तिक । तिहारका अवसरमा खेलिने देउसी तथा भैलो लगायत सांस्कृतिक कार्यक्रम राति १० सम्म मात्र गर्न गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी रातको समयमा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जनाउँदै १० बजेपछि त्यस्ता......
सुदूर खबर , १० कात्तिक । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यसवर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत यही कात्तिक १६ गते मङ्गलबार मध्याह्न ११ बजेर ५२ मिनेट जुृरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकले सो निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष टीका लगाउन नहुने समय नभएकाले......
फेसबुक अहिले लभ अफेयर चलाउने एउटा गतिलो साधन बनेका छन् । तर, फेसबुकले पिरतीमात्रै गाँस्दैन, पिरतीमा संकट ल्याउन समेत बेर लाग्दैन ।
कुवेतमा फेसबुकका कारण यस्तो एउटा रोचक घटना भएको छ, जसले पारिवारिक जीवन नै संकटमा पुगेको छ । कुवेत निवासी एक व्यक्तिलाई युवतीको फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । उनले हत्त न पत्त......
विदेश गएका श्रीमानका श्रीमती किन परपुरुषसंग अनैतिक सम्बन्ध राख्छन : कारण यस्तो छ
विवाहपछि महिला पुरुष पारिवारिक जिवनमा प्रवेश गर्छन् । तर यौन वैज्ञानिकहरु भने विवाहबाट केवल सामाजिक नियमका आधारमा महिलापुरुष लोग्ने स्वास्नीको रुपमा एक भएका हुन्छन् तर भावनात्मक रुपमा उनीहरुलाई एक बनाउने काम भने यौन सम्बन्धले मात्र गर्छ ।
विवाह भनेको स्त्री पुरुषका लागि एक भावनात्मक तथा सामाजिक......
बेहडाबाबा धार्मिक स्थल गंगा दशहरा मेला – कैलाली
बेहडाबाबा मन्दिर सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मात्रै नभई नेपालकै चर्चित मन्दिर मध्येको एक हो । जहाँ पति तथा पुत्रलाभको विश्वास बोकेर तिर्थालुहरु आउने गर्छन् । सोचेको काम पुरा हुने भएकैले होला, मन्दिरमा श्रद्धालुहरुको भीड बढिरहेको पाइन्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ (साविक उर्मा–४) रामपुरस्थित बेहडाबाबा......
कञ्चनपुरमा हात्ती आतंक, स्थानीयका घरगोठ भत्काए
कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका–१३ पिपरैयामा जंगली हात्तीको आतंक बढेको छ । क्लाफाटा आरक्षको जंगलबाट आउने करिब ३० वटा हात्तीको समुहले यस क्षेत्रका दर्जनौं कृषकको धनमाल नष्ट गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
जंगली हात्तीको ठूलो बथान गाउँ पस्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण आतंकित भएका छन् । हात्तीको......